Kooxaha Juventus, Barcelona iyo PSG oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Manchester City – Gool FM
(Torino) 06 Maarso 2021. Kooxda reer Talyaani ee Juventus ayaa dooneysa inay xalliso dhibaatooyinkeeda dhaqaale, taasoo ku qasbi karta inay iibiso mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah sida Cristiano Ronaldo ama Paulo Dybala xagaaga soo socda.
Halka dhinaca kale, laga yaabo in Juventus ay dagaal la gasho kooxaha Barcelona, iyo Paris Saint-Germain, si ay ula soo saxiixato xiddig ka tirsan naadiga Manchester City.
Wargeyska “AS” ayaa xaqiijiyay in Juventus ay xiiso xoogan u qabto inay hesho adeega weeraryahanka reer Argantina iyo kooxda Manchester City ee Sergio Aguero, kaasoo qandaraaskiisa City uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Wargeyska ayaa tilmaamay in Aguero uu ku jiro liiska xiddigaha ay bar-tilmaameed ka dhiganeyso kooxda reer Talyaani, balse ay loolan adag kala kulmi doonaan kooxo badan oo ay ka mid yihiin Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, iyo sidoo kale Inter Milan.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in aan meesha laga saari Karin in Sergio Aguero uu cusbooneysiiyo qandaraaska uu kula jiro Manchester City, kaasoo uu 10 sano ka hor ugu biiray 40 million euros.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in xiddiga reer Argentina uu mushaar ahaan uga qaato Manchester City 14 million euros, halka Juventus ay u soo bandhigi karto dalab uu mushaar ahaan ku qaadanayo kaliya 7 million euros, iyadoo bedelkeeda u saxiixi doonta qandaraas labo sano ah, ilaa iyo June 2023.